श्रीमतीको कुरा गर्न खोज्दा अघोरी बाबाले यसरी छड्के जवाफ दिए, के अघोरी बाबाको डिभोर्स भएको हो त ? (भिडियोसहित) – Dainik Samchar
January 16, 2021 398
Prevआखिर को हुन् सपनाको श्रीमान ? पढ्दा पढ्दै केटासंग भा’गेपछि यसरी सडकमा पुगेकी थिइन सपना
Nextश्रीमतीको कुरा गर्न खोज्दा अघोरी बाबाले यसरी छड्के जवाफ दिए, के अघोरी बाबाको डिभोर्स भएको हो त ? (भिडियोसहित)
२८ वर्षीया सोमिकाले जन्माइन् प्रसुति गृहमा पाँच ब’च्चा’
सेतो पानी बगिरहने समस्याले हैरान हनुहुन्छ ? यसरी गर्नुहोस् घरमै उपचार ! (16384)
यिनै हुन् पब्जी खेल्दा लभ परेपछी ‘लिभिङ टुगेदर’मा बस्दा आज मृ’त भेटिएका अनिश र युनिशा, ‘युनिशा न,’ग्न अवस्थामा खाटमै… (6719)
दाँतको बीचमा ग्याप छ ? जान्नुहोस् यस्ता व्यक्तिको स्वभाव (6066)
किन स्टेजमै कु’टिए चर्चित गायक राजेश पायल राई यस्तो छ कारण (भिडियो सहित) (5783)
काठमाडाैंको काभ्रेस्थलीबाट अचम्मकी महिला पक्राउ (5588)
काठमाडौँ उपत्यकामा स्मार्ट लकडाउनको आदेश, आज मध्यराति १२ बजेदेखि लागू हुने (5585)
१० जना हिरोहरुसँग सुत्दै हिड्ने केटी हो रेखा थापा : शिल्पा (4872)
संसारमा ३ प्रतिशत मानिसको हत्केलामा मात्र हुने यस्तो चिन्ह, तपाईकोमा पनि छ की ? (4478)
टिकटकमा मुुठ्ठी ठोक्काएर गरिबलाई पैसा बाड्ने गिविना, के छ उनको यति ठूलो आयस्राेत ? (4328)